Akubona bonke abavukuzi siyosinda bitcoin Izindleko nokwehlisa - Blockchain Izindaba
Akubona bonke abavukuzi siyosinda bitcoin Izindleko nokwehlisa
Kungakanani okufanele Bitcoin izindleko ukuze izimayini futhi iba inzuzo?
A 70% yokwehla kwezinga intengo bitcoin ukusuka maphakathi Disemba cishe kunciphise inzuzo yezimayini. Nge ezingeni intengo lanamuhla, awela ubuncane $ 6,048, abavukuzi ngobukhulu kuphela ongabona ingaziki. Kodwa ukuhlaziywa Bloomberg kubonisa ukuthi ngisho phakathi abadlali ezinkulu asinakusebenzisa ukusinda.
Namuhla, 67% we izimayini-amandla bagxila ezandleni amachibi ezine: BTC.com, AntPool, SlushPool futhi BTC.top. Kodwa Bloomberg umhlaziyi Tim Kulpan bamafa: “Uma ungeyena inkampani ephethe sezimayini ukufaka esheshayo uthenge ngamanani wholesale, ke cishe wena ukulahlekelwa imali.” kuyanda Disemba yayanda emakethe izimayini ngu 40%, okwaholela Ukungadli kohlelo: ngokuvumelana Blockchain.info, bekuyi 51% nzima kukhishwe block.
Selikhule kokubili yinkimbinkimbi izibalo kanye nenani amandla kudliwe. Uma bitcoin sima sezinsuku ezingu-50 ezihambayo isilinganiso $ 13,200, ke nge yinkimbinkimbi zamanje kanye nenani hashes, lowo muntu elithola isilinganiso ngamathuluzi ezinhle babeyothola $ 80 ngesonto (kodwa abadala imishini, the ephansi inzuzo). Nokho, ngisho ukufaka bitcoin lezimayini eziphambili kakhulu musa ukuvikela ingozi izimali kokulahlekelwa, lapho intengo lehla ngokucijile, futhi lowo muntu elithola isala inethiwekhi: abavukuzi zilimale ukuqala at iphuzu intengo $ 6,800.
Uma intengo aliphumi, ke lowo muntu elithola isilinganiso uzolahlekelwa $ 3 ngesonto. Imayini amachibi, ezifana AntPool, ingaqhubeka ensimini omuhle, kodwa inzuzo yabo iyoba 90% ngaphansana nge ngosuku-50 ngokwesilinganiso ezihambayo $ 13,200.
Tim Kulpan abalingisa kuphela, ngokombono wakhe, isimo, lapho izimayini uyophinde abe inzuzo: ukukhula bitcoin ukukhululwa esiyisibopho ingxenye yabavukuzi kusukela umdlalo ukuze kuncishiswe mncintiswano. I umhlaziyi uyaqiniseka ukuthi abahlanganyeli bonke wanamuhla ngeke ukwazi ukugwema ukulahleka: noma othile uzokhulula “umkhumbi izimayini” kusukela isisindo sayo, noma wonke umuntu minza.
Uma umuntu yangasese futhi ufuna yezimayini Bitcoin nabanye Cryptocurrency, kungcono ukukwenza ngokusebenzisa Google Izimayini, akhokhe imali Ochwepheshe futhi bajabulele izinzuzo ukuthi izinkampani ezinkulu uthole. Nazi phezulu 3 izinkampani yeCloud Izimayini: Hashflare, IQMining noma Genesise Izimayini
Kuyini Bitcoin Core futhi abakwenzayo
The main ikhasimende ye ...
bitcoinblock chainifu izimayiniumvukuziizimayiniizindaba
Thumela Previous:ezine kuphela Ukuhwebelana Crypto ukulalela izimfuneko umlamuli South Korean
Thumela Landelayo:Technologies okusha Ingabe Ngokuza Xazulula Scalability Bitcoin sika